Ogige ntụrụndụ kacha mma na USA | Akụkọ Njem
Ogige ntụrụndụ kacha mma na USA
Maria José Roldan | | America, Oge ntụrụndụ
Ọ bụrụ na enwere ihe mara mba United States n'oge okpomọkụ, ọ bụ ogige ntụrụndụ ya, ọ nwere ọtụtụ ma dị oke mma, mana dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, o nwere ogige ntụrụndụ isiokwu ndị kachasị eleta n'ụwa. . Enwere ike ịga leta ogige mmiri ndị a na USA n'oge niile n'afọ ebe ọ bụ na ha nwere ọrụ pụrụ iche iji zere oyi.
Ma mgbe okpomoku dara, ọ dịghị ihe dị mma ma na-enye ume ọhụrụ karịa igwu mmiri na ọdọ mmiri. Ọ bụ ezie na bat bụ ọdọ mmiri ọ na-enye ume ọhụrụ n'ezie, n'ọtụtụ oge ndị mmadụ na-achọkwa mmetụta uche. Ọ bụrụ na ị na-aga njem na United States ma chọọ ịkụ okpomọkụ ma nwekwaa oge, ị gaghị echefu ndepụta a nke ogige ntụrụndụ kacha mma na USA. Ga-enwe ọ greatụ ọfụma ma nwee ọ asụ dịka a ga - asị na ị bụ nwata ọzọ. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ogige ntụrụndụ mmiri na - enye ebe nkiri na - akwụsị obi ma na - enyekwa ezinụlọ obi ụtọ. Site na mmiri na-agba mmiri ruo n'ihe nkiri slide, ị gaghị echefu akụkụ ya ọ bụla.
Noahgbọ Noa ma ọ bụ Nke Noa Igbe
Ogige mmiri a dị na Wisconsin Dells na ọ bụ ogige mmiri kachasị ukwuu na mba ahụ, a na-akpọ ya Igbe Noa maka nke a ma dịrị ndụ maka aha ya na ọtụtụ ebe nlegharị anya mmiri na-ewepụ ume gị ozugbo ị banyere. site n'ọnụ ụzọ. Akaụntụ na-enweghị ihe na-erughị Ihe ngosi 51, ọdọ mmiri mmiri abụọ na sọfụ simulator.
Ọ na-enyekwa ihe omume maka ezinụlọ dum, mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ihe na-akpali akpali ị nwere ike ịga maka egwuregwu ya dị oke egwu, gụnyere ọdụ nke akpị na-eziga ndị njem nleta na slide nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke dị larịị. I nwekwara ike ịgafe na Black Anaconda, nke dị ka mmiri na-agba mmiri ma bụrụ ihe na-atọ ụtọ na America.
Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi ị nwere nnukwu ụlọ oriri na ọ toụ toụ iji fanye batrị gị na inwe ike iri nri ndi obodo dika chiiz curd ma obu ichoputa ofe ya magburu onwe ya. Obi abụọ adịghị ya, ogige mmiri a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị atụ aro ka ị gaa.
Ogige a dị na Kansas City ma ọ ga - eju gị anya site na nnukwu ihe ngosi ya. O nwere otu akpọrọ Verruckt, nke kachasị elu na ụwa ga-ewepụ ume gị tupu ịwụda ya. O nwekwara ọtụtụ ihe nkiri slide ebe ndị njem nleta ya nwere ike ịwụli n'otu oge ha na-eru nnukwu ọsọ.
Ma ọ bụrụ na ịnọghị oke oke ma họrọ ịnọ na oke osimiri, ogige mmiri a na-enyekwa gị osimiri na-asọ oyi iji nwee mmiri. I nwekwara ike ịnụ ụtọ ebili mmiri dị ka a ga - asị na ị nọ n'oké osimiri na ọbụna wụfee otu ndagwurugwu ma ọ bụ nwee nnukwu ogige.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na nke ahụ ezughi, ị nwere ike ịchọ ụlọ mmanya n'ime ọdọ mmiri iji nwee ohere izu ike na mmiri ya na-ekpo ọkụ mgbe ị na-a enjoyingụ ihe ọ drinkụ drinkụ na-enyere gị aka ịgbanye batrị gị tupu ịga n'ihu njem gị na ogige mmiri a.
Mmiri mmiri o mmiri World
Ogige mmiri a dị na Denver, nwere nso Ihe ngosi mmiri 40 na Waterbọchị Mmiri Worldwa na-eme nnukwu oriri iji cheta mkpa mmiri di. Mile High Flyer bụ nnukwu igwe na-agba mmiri ma bụrụ otu n'ime ebe kpakpando nke ogige ahụ maka ọsọ na ike ya.
Oké ifufe ahụ bụ ihe pụrụ iche na njem ụgbọ elu ebe ndị na-anya ụgbọelu na-agbada tube na ọchịchịrị ebe oke ifufe na-alaghachi. Ndị ọbịa na-enwekarị mmasị na ya n'ihi na nnukwu égbè eluigwe, ọkụ ọkụ, mmiri ozuzo na-agbanweghachi ma ihe a niile na-eme ka ndị njem nleta nwee mgbagwoju anya na mgbagwoju anya.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọsọ, mgbe ahụ ị gaghị enwe ike izere ịgafe Turbo Racer nke ị ga-achọpụta mgbe ị banyere n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ wee malite ịchọpụta ihe niile ọ nwere maka gị.
White mmiri Park
White mmiri Ogige ị nwere ike ịchọta ya n'ime Branson, . Ogige mmiri a dị obere karịa ogige ndị ọzọ nwere njirimara ndị a dịka ndị a kpọtụrụ aha n'elu, mana ọ gaghị ahapụ gị enweghị mmasị maka ihe ọ bụla ọ ga-enye. Mmiri ya na-acha ọcha na-akwụ ụgwọ maka nha ya yana ọ nwere ebe a haziri ahazi nke ọma, na ihe kachasị mma ... bụ na ọ nwere ọrụ maka ezinụlọ dum, maka ụmụaka.
O nwere slide a na-akpọ Kapau nke ahụ nwere ọdịda nke dobe nke ogo 70 na ighikota ga-ewe gi hiccups pụọ. Ma ha nwekwara ebe nkiri maka afọ niile, yabụ ị nwekwara ike ịnụ ụtọ, dịka ọmụmaatụ, Splashaway Cay na geysers na ndị na-agba mmiri nke ga-enyere gị aka ịnụ ụtọ akụkụ ya ọ bụla. Ma enwere ihe na-akpọkarị ndị njem nleta ọtụtụ iji gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri a kama ịga na nke ọzọ, nke ahụ bụ usoro oge ahụ. N'ime ọnwa nke July na August, ogige ntụrụndụ a na-emeghe ruo abalị iri n'abalị site na Tọzdee ruo Satọde.
mmiri Mba USA
Ogige ntụrụndụ a dị na Williamsburg, Virginia na ọ bụ otu n'ime ogige ntụrụndụ kachasị mma ị nwere ike ịchọta taa. Ọ ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ ahụmịhe nke enweghị oke na ụfọdụ n'ime ebe nkiri ya dị ka agbụrụ na-agbada ugwu ga-alaghachi ozugbo na nnukwu mgbidi mkpọda ga-ewepụ ume gị. I nwekwara ike iso ndị enyi atọ gaa Akwadozu nke a haziri maka obi ike.
Ogige ntụrụndụ bụ nke kachasị nwee obi ike ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ụsọ mmiri ya. N'ezie, ọ bụ ọmarịcha ogige maka ndị na-enwe mmasị ịnụ ụtọ mmiri na anwụ. Yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ma zuo ike n'akụkụ ebe nkiri, njem na mmemme ọ na-enye gị. Nwekwara ike ịnụ ụtọ ma bụrụ akụkụ nke ihe ngosi ndụ na-ewere ọnọdụ n'oge dị iche iche, dị mma maka ụmụaka.
Ugbu a ị nweghị ihe ngọpụ, ị nwere ndepụta dị ukwuu maka ịhọrọ ogige mmiri nke kacha dabaa ụdị mmadụ gị ma ọ bụ ọdịmma ezinụlọ gị, iji nwee ọ inụ na nnukwu ụzọ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Oge ntụrụndụ » Ogige ntụrụndụ kacha mma na USA
Obodo 5 kachasị mma n'ụwa
Andy Warhol na Louise Bourgeois na Guggenheim Museum